Soomaaliya oo weli laga saarin liiska dalalka loo diiday ineey soo galeen Mareeykanka | Somaliska
Soomaaliya oo weli laga saarin liiska dalalka loo diiday ineey soo galeen Mareeykanka
Maamulka Trump ayaa markale sii adkeeyey sharicgii hore ee xanibayey in dalal muslimiin u badan ay muwaadiniintooda soo galaan dalkaasi, halka dalal kale oo hor lehina lugu soo daray.
Sharcigan cusub ayaa waxaa ku jira dalal kale oo aan horey uga mid aheyn kuwii la bar tilmaameedsaday waxaana ka mid ah dalalka Fenasuwela, Kuuriyadda Waqooyi iyo dalka Jaad. Halka liiskan laga saaray Suudaan oo horey uga mid aheyd.
Soomaaliya oo ka mid ah dalalkaasi ayaa haba yaraatee aan wax is badal ah lugu keenin iyadoo sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya ka hadlin aragtideeda la xirriirta, waxaana ay u muuqata mid ku ayiday aamus. Dalka Fenasuwela ayaa xanibaadan waxaa lugu soo rogay qaar ka mid ah siyaasiinta dalkaasi oo Mareykanku cunaqabateyn uga dhigayo xilli dalkaasi qalalaase siyaasadeed ka socdo. Amarkan cusub uu Trump soo saaray ayaa filayaa in dhawaan uu dhaqan galo, waxaana u kuu sheegay mid uu ku doonayo in mudnaanta koowaad siiyo ammaanka dalkiisa.
Sharcigan cusub ee maamulka Trump soo saaray ayaa la kulmay cambaareyn iyo iyadoo maxkamadda sare dalkaasi ay horey u diiday go’aankaasi. Hey’adda xaquuqda insaankana waxaa ay ku tilmaantay mid lugu faquuqayo dalalka caalamka.